चरित्रहीन बेष्या पुरुष – सिम्रन भट्ट – Hotpati Media
चरित्रहीन बेष्या पुरुष – सिम्रन भट्ट
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार ११:२८ मा प्रकाशित (3 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाडौँ-किन हाम्रो समाजमा नारी मान्छेले सम्मान पाउदैन । के नारी मान्छे हैन ? मन हुदैन नारिको ? किन गर्छन दुनियाँले नारी मान्छेको चरीत्र हत्या ? हुन त चलेको रित भएर त होला नारिहरूले आमाको गर्भदेखि नै अन्याय र अत्याचार भोगिरहेका हुन्छन ।
जोत्ने खेतवारि नभैदिएको भए खाना काहा पाईन्थ्यो होला । त्यस्तै सृष्टिकर्ता नारी नहुने हुन कहाँबाट जन्म हुने थियो होला । म भन्छु पुरुष को हुन ? हुदा खादा रहदा मोज मस्तिमा गर्ने छुट्टिदा फालेर हिड्ने जात हो । मलाई सोध्लान पुरुष बिना पनि त सृष्टि सम्भब छैन । हो म स्वीकार छु । सबै पुरुष सबै नारी एउटै हुँदैनन हुदैन पनि ।
वियोगमा थपडी बजाउन सक्ने पुरुषलाई के मर्दको संज्ञा दिनु । जिउडाल हेर्दै खाईलाग्दो हुदैमा पनि त्यो पुरुष हुदैन । उसको ब्यवहार पनि त चोखो हुनु पर्छ । देखेकी छु मैले कैयौ त्यस्ता पुरुष परस्त्रीसंग मस्ती गर्ने,नानाथरी नाटक गर्ने,अंगालो मार्दै हिड्ने,तिनै पुरुष पानी माथि ओभानो बन्न घरकी सोझो महिलालाई थर्कमान पार्ने । सबैलाई मैले जोड्ने कोसिस गरेकी पनि छैन जोडेकी पनि छैन । पहेलो देखिने जति सुन हुँदैन । छन केही पुरुष जसले गर्दा समाजमा नै गनाईसकेका छन उनलाई अझै पत्तो छैन ।
चरित्रहिन बेष्या पुरुष ?
सद्भाव सत्कर्म गर्न सबैले सिक्दा केही फरक पर्दैन । जवानिको मात देखाउने अनेक चरित्र केलाउदा फरक पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । म पनि अनपढ त छैन थोरै लेख्न र बोल्न जानेकी छु । तातो,चिसो,तितो,अमिलो,पिरो,मीठो,नमिठो छुट्याउन त जानेकी छु । मैले घमण्ड गरेकी पनि हैन । घरमा टाउको लुकाएर बाहिर बादसाह बन्ने पनि पुरुष छन । हुन त हाम्रो समाज हिजो देखि त्यसरी नै चलेको छ । धनको घमण्ड गरेर हिडने पनि कति छन । सबै धनले पुग्ने भए अरबपती,खरबपती त कति छन कति संसारमा । तर धनको घमण्ड गरेको सुनेकी छैन । लाख देखाएर काख खेलाउने पुरुष धेरै भेटेकी छु । जसका अर्धाङीनि घरमा छन । अरुको कुरा गर्नु भन्दा पहिले सोचेर बोल्नु जायज लाग्छ मलाई । जहाँ अधिकार छैन जहाँ आफ्नो औकात पुग्दैन त्यहाँ कुरा गर्नु बेकार हो । अन्ततः जसले अरुको जरो खन्छ टीका-टिप्पणी गर्दै हिड्छ त्यो मान्छेले आफुलाई सभ्य ठानेको हुन्छ । जो दुनियाँको अगाडि गिरेको उसले पत्तोसम्म पाएको हुदैन । जसलाई दुनियाँले चिनेको हुन्छ मैले बेलिबिस्तार लगाउन पनि आवश्यक देखिन । घरमा अनेक बाहाना बाजि लगाएर क्लब,डान्स,बार,क्यासिनो धाउने रक्सिको मात चडेर नौटंकी देखाउने पुरुष यो समाजको लागि महान । उफ,त्यस्ता पुरुषलाई हामी नारिले देवता भनेर पुज्नु । सबै पुरुष बिग्रेका पनि हुदैन । पुरुष पनि त गलत छन तर लुकाउछन नारी माथी औंला उठाउछन । गलत नारी हैन तिनै पुरुषले भनेर गलत बनाईएकी हुन नारी । तर स्वीकार गर्दैन हाम्रो समाज बेश्या पुरुष भनेर ।
बेश्या नारी हैन ?
हाम्रो नेपाली समाजले अझै काचुली फेरेको छैन । हिजो मैले किताबमा जस्तो पढेको छ आज पनि उस्तै भोगेकी छु । हिजो पनि त सति सत्ययुगमा चितामा जलेकी त हुन नारी । कठै ती अभागी नारी ! हामी त भाग्यमानी नारी हु । तर अझै गर्न बाकी पनि छ । मान्छेलाई समयले बनाउछ गिराउछ । मान प्रतिष्ठान सबैको हुन्छ । खान लागाउन नहुदैमा गरिब हुँदैन मान्छे । एक छाक टार्दैमा धनी हुदैन मान्छे । नाकमा फुलि,रातो कुरता सरवाल देख्न नसक्ने कति छन पुरुष । हाम्रो समाज कति नारी छन तिनै पुरुषबाट अपहेलित भएकी,घरबाट निकालिएकी,आगो लगाएर अंगभंग भएकी । बाच्न, जीवन जिउन अरुको सरणमा गएकी छन । तिनै नारिलाई बेश्या भन्दै हिड्ने । मान्छेका अनेक समस्या हुन्छन् । मान्छे जिउनको लागि अनेक बाहाना बाजि लगाएर ज्यानको दाउ पनि लगाएर हिडेको हुन्छ । स्वतन्त्र रूपमा बाच्न पाउने अधिकार नारिको पनि छ । एक छिन राम्रो लगाउदैमा,साथी भाईसंग बस्दैमा रमाइलो गर्दैमा सर्वस्व गुमाईसकेकी हुदैन । नारी बेश्या हैन । नारी बेश्या त तिनै नजाती पुरुषले बनाएका हुन । बाच्न पाउनु सबैको अधिकार छ । बिचरा नारिको के दोष ,के थाहा पुरुषलाई तिनीहरुलाई पीडा केछ भनेर । चरीत्र हत्या हैन । सम्मान गर्न पनि सिक्नु पर्छ कति पुरुषले त ! यति अझै बुझ्न जरुरी छ । बोल्नु भन्दा पहिले सोच्नु पर्छ । नारी पुरुष समान हुन ताकी एकले अर्काको मर्का बुझ्न जरुरी छ ।
(सिम्रन भट्ट एक कुशल साहित्यकार हुन)
डा. उपाध्यायले गीत लेखेरै राखे १४ विश्व कीर्तिमान
महाकवि देवकोटा सङ्ग्रहालय :कविकुञ्ज प्राप्तिमै एक वर्ष
“आमा” – सुचित्रा श्रेष्ठ